Wasiirka Maaliyadda oo balan qaaday in Miisaaniyadda 2019 loo fulin doono sida ay u qoran tahay – Kalfadhi
December 30, 2018 December 30, 2018 Kalfadhi
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa, isaga oo ka jawaabaya su’aalaha ay Xildhibaannada qaar ka qabaan Miisaaniyadda 2019-ka, waxa uu sheegay in ay xukumaddu dib u qaabeyn ku waddo habka dhaqaalaha dalka, gaar ahaan tan Dowlad Goboleedyada. Qaabka Dhaqaalaha Dowlad Goboleedyadda waa mashaariic ee maahan dhaqaale kale” ayuu yiri Beyle. “Waxa ayna ku xiran tahay awoodda iyo sida ay u kala baaxad weyn yihiin” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Mashaariicda faraha badan ee ku qoran Miisaaniyadda 2019-ka, oo uu dhaqaala fara badan ku baxyo, hase ahaatee uu Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabku muujiyey inaan la qaban, ayuu Wasiir Beyle sheegay iney fuliyeen mashaariicdii hore. “Mashaariicda, waxaan ka fulinay meelo badan sida Kismaayo, Jowhar iyo Gado, waana sii wadi doonaa”. ayuu yiri Beyle.
Wasiirka Maaliyadda Xukumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beyle, waxa uu sheegay inuu Golaha Shacabka la qaatay in Miisaaniyadda Waxbarashada dalka sida ay ugu qoran tahay War-bixinta Golaha loo qeybiyey loo bixiyo. “Waan idin la qaatay in lacagta waxbarashada iyo Jaamacadda Ummadda la bixiyo” ayuu yiri Wasiir Beyle.
Maanta, oo uu Goluhu leeyahay kulan kale oo aan caadi ahayn oo lagu meel-marinayo Miisaaniyadda 2019-ka, ayaa suura-gal ah inuu Wasiirka Maaliyaddu wajaho ka jawaabista su’aalo kale, inkasta oo uusan shalayba uga wada jawaabin Xildhibaannada Golaha wixii su’aal ahaa ee laga weydiiyey Miisaaniyadda.
Xildhibaanno ka walaacsan ka run sheegista Xukumadda ee Miisaaniyadda 2019-ka